कन्टेनर चालक नेपाल प्रहरीबाट निर्घात कुटिए – Janapriyakhabar
कन्टेनर चालक नेपाल प्रहरीबाट निर्घात कुटिए
रसुवामा एक कन्टेनरका चालक नेपाल प्रहरीबाट निर्घात कुटिएका छन् । नेपाल-चीन सामान ढुवानीका लागि प्रयोग हुँदै आएको बा. ६ ख ४९२५ नम्बरको कन्टेनरका चालक श्रीमान् तामाङ मंगलबार नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) र हवल्दारबाट रसुवाको टिमुरेमा कुटिएका हुन् ।
टिमुरे सडकमा अव्यवस्थित ढंगले राखिएका सवारी हटाउन पुगेको प्रहरीले सामान्य विवादका क्रममा कुटपिट गरेको खुले पनि असई र हवल्दारको पहिचान प्रहरीले गोप्य राखेको छ । ‘यसरी कुटपिट गर्न मिल्छ ? ड्राइभरको इज्जत छैन र भन्या ?’ एक प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीलाई सुझाउँछन् । तर, चालकले सुरुमा गल्ती गरेको जिकिर गर्दै प्रहरीहरु लात्ती र मुक्का बर्साइरहन्छन् ।
भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि प्रहरी रवैयालाई लिएर यसको आलोचना भएको छ । ट्यांकर चालकहरूले घटनाको विरोधमा बुधबार सवारी आवागमन बन्द गराउने चेतावनी दिएका छन् । यसबारे जानकारी लिन रसुवा प्रहरी प्रमुख भोगेन्द्र पुरुष ढकालसँग सम्पर्क गर्दा उनले अव्यवस्थित गाडी हटाउन प्रहरीले आग्रह गर्दा घटना भएको र यसमा चालक स्वयं जिम्मेवार रहेको दाबी गरे ।
यद्यपि, उनले यसबारे अनुसन्धान थालेको र प्रहरी दोषी देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘घटनापछि हामीले प्रहरी र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेका छौं । यसबारे एक समिति पनि बनाउँछौं । अनुसन्धानबाट प्रहरी दोषी देखिए कारबाही गर्छौं,’ डीएसपी ढकालले भने । सामाजिक सञ्जालमा भिडियोलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला उनले सार्वजनिक भिडियोको दृष्य सुरुको नभएर अन्तिमको भएको जिकिर गरे ।